dib u eegis Nvidia Shield TV: sanduuqa ugu wanaagsan ee Android TV la qaadidda AI cajiib ah - Rule News
Asalka Nvidia Shield wuxuu muddo dheer ahaa isticmaale awood leh sanduuqa qulqulka ee TV-ga Android TV ee xulashada, iyo waaqici ahaan midka kaliya ee aan kugula talin karo. Laakiin iyada oo dib loo naqshadeeyay sida tuubbo qarsoon oo cusub, wax badan oo ka sii wanaagsan oo adeegsada-saaxiibtinimo leh iyo qaab caqli-gal ah oo loogu talagalay fog, TV-ga cusub ee loo yaqaan 'Shield TV' ma aha oo kaliya sanduuqa qulqulka ugu fiican ee loogu talagalay dadka isticmaala awoodda, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee loogu talagalay dadka caadiga ah sidoo kale - isla halkaas waxaa ku jira Apple TV 4K iyo Amazon Fire TV Stick 4K.
Naqshad cusub oo dhuumasho ah, fog fog, waxqabadka sare iyo HD cajiib ah ilaa 4K kor u qaadista waxay u sameysaa sanduuq TV ah oo dilaa ah
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “dib u eegis Nvidia Shield TV: sanduuqa ugu wanaagsan ee Android TV la qaadidda AI cajiib ah” waxaa qoray Samuel Gibbs tifaftiraha teknolojiyadda macaamiisha, loogu talagalay theguardian.com Arbacada 26ka Febraayo 2020 07.00 UTC
Nvidia Shield TV waa nooc kafilan sanduuqa TV-ga Android ee ugu wanaagsan sanado, ay ka buuxaan tiknoolajiyad kor u qaadid cusub oo ku saleysan AI iyo naqshad cusub oo lagu keydin karo booska.
TV-ga cusub ee Nvidia Shield TV wuxuu ku yimaadaa laba nooc: stream 149,99 stream saxeex warbaahineed iyo "Pro" kale oo loogu talagalay £ 199 oo loogu talagalay in badan oo ka mid ah ciyaaraha.
Kuwa aan aqoon u lahayn noocyada qalabka warfaafinta warbaahinta, waxay saameyn ahaan ku darayaan waayo-aragnimo TV-ga casriga ah telefishannadii hore ama beddelaan walxaha casriga ah ee badanaa laga cabsado ama waqtigooda ku dhacay ee noocyo casri ah, si aad u isticmaali karto barnaamijyada sida Amazon Prime Video, BBC iPlayer iyo Netflix.
Nvidia ayaa muran la’aan magaca ugu weyn ku leh shaxanka, sidoo kale wuxuu sameeyaa Chips mobile oo loo yaqaan Tegra, kaas oo ay ku saleysan yihiin labadan sanduuq ee TV-ga Android ah. Gaashaankii hore ayaa lagu sii daayay 2015 iyo, ka duwan TV-yada kale ee casriga ah iyo sanaadiiqda qulqulka, waxaa lagu sii hayaa mid cusub iyadoo cusbooneysiin joogto ah, ka dhigaysa tan ugu fiican, waayo-aragnimada ugu badan ee TV-ga Android-ka ah ee la heli karo ama lagu dubay TV ama sanduuqa sare.
TV-ga cusub ee loo yaqaan 'Shield TV' ayaan ku qasanayn qaaciddada. Waxaad heleysaa mid ka mid ah sanduuqyada warbaahinta-qulqulaya ee ugu awoodda badan ee la heli karo, soconaya nooca ugu dambeeya ee TV-ga Android-ka ah iyo taageerada la midka ah ee barnaamijka muddada-dheer.
Meelaha saddex-geesoodka ah ayaa u muuqda mid aan caadi ahayn jaleecada hore, laakiin runti sifiican ayuu u shaqeeyaa kamana siiban doono ama kuma lumi doono dhinaca kursiga fadhiga. Sawir: Samuel Gibbs / The Guardian-ka
Waxa cusubi waa qaabka foomka. Taleefishinka gaashaan ee caadiga ahi maaha sanduuq ee waa tuubo yar oo leh fiilo koronto iyo koronto ethernet ah oo ku taal dhinac iyo HDMI godad iyo kaarka microSD oo dhinaca kale ah. Fikradda ayaa ah inaad ku qarisid tuubadan yar TV-gaaga gadaashiisa taxanaha taxanaha ah adigoon qaadan meel muhiim ah.
Fog fog sidoo kale dib ayaa loo rogay. Halkii laga noqon lahaa caato, Remote taabasho-xasaasi ah, nooca cusub wuxuu leeyahay muuqaal saddex xagal ah, qaadataa laba baytariyada caadiga ah ee AAA oo ay ku jiraan kuwa dib loo soo celin karo, wuxuu leeyahay miisaan wanaagsan oo noocyo badan oo badhanno ah oo gadaal gadaal laga shidi karo markii qalabka fog laga soo qaado, oo ay ku jiraan hakadyo iyo badhamada mugga leh.
Qaabku wuxuu umuuqan karaa wax qariib ah laakiin waxaa loogu talagalay inuu kahortago inuu hoos ugudhaco dhinaca ama dhabarka sofayaasha, wayna shaqaysaa. Fudud, naqshadeynta adeegsadaha.
Remote-ka ayaa Shield-ga TV-ga kula xiriiraya Bluetooth wuxuuna leeyahay bir Blaster-ka dhamaadka si loo xakameeyo mugga TV-gaaga, amp ama maqal. Waxay u shaqaysaa si weyn.
Processor: Nvidia Tegra X1 +
RAM: 2 ama 3GB
Kaydinta: 8 ama 16GB + kaarka microSD
Xiriiriyaan: wifi ac, Bluetooth 5, gigabit ethernet, HDMI 2.0b (HDCP2.2), 2x USB 3.0 (Pro kaliya)
Software: Android TV (Android 9 goobeed)
Taageero qaab: ilaa 4K @ 60Hz, Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos, TrueHD iyo Digital Plus, DTS-X
Cabirka: 40dhexroor mm, 165dhererka mm ama 98 x 159 x 259.3mm
Weight: 137g ama 250g
Gaashaanka TV ga ayaa leh waa heerka, interface TV-ga Android TV-ga ah, xayeysiis la'aan, iyada oo xoogaa lagu daro Nvidia waxyaabo sida kor u qaadista AI, GeForce Haddaba socodka ciyaarta iyo cusbooneysiinta qalabka. Sawir: Samuel Gibbs / The Guardian-ka
Barxadda TV-ga Android ee Google waa nidaam fudud oo fudud oo ku saleysan barnaamijyada iyo qaab-dhismeedka carousel ee lagu hagaajin karo oo muujinaya waxyaabaha ka socda barnaamijyada qaarkood. On the Shield TV waa deg deg oo fudud in loo maro hab aan inta badan ku jirin TV-yada casriga ah.
Ka gudubka dhexgalka waa toos ula guriga, gadaal iyo gadaal, hoos, badhanka bidix iyo midig ee giraan ku wareegsan badhanka xulashada. Qabashada badhanka guriga ayaa soo baxaya marin deg deg ah liiska barnaamijyada, halka guriga oo laba jibbaaranaya uu kuu geynayo barnaamijyo dhawaan la isticmaalay sida taleefannada casriga ah ama kiniiniga ah.
Qabashada badhanka dambe waxay keeneysaa marin deg deg ah miisaska dejinta, halka badhanka menu-ka ee midigta kore laga beddeli karo si loo bilaabo barnaamijyo gaar ah, dejinta ama shaqooyinka. Xitaa waxaa jira badhan loo qoondeeyay Netflix oo si toos ah loogu boodayo.
Tuubbada waxay leedahay fiilo HDMI ah iyo booska kaarka microSD hal dhinac. Sawir: Samuel Gibbs / The Guardian-ka
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Android TV la barbar dhigo nidaamyada kale ee lagu dhisay TV-yada ayaa ah taageerada ballaaran ee laga helo inta badan adeegyada waaweyn ee UK iyo Mareykanka.. Google Play, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 iyo Spotify ayaa la heli karaa, iyada oo labada nooc ee xusida mudan ay yihiin BT Sport (in kastoo BT TV la heli karo) iyo barnaamijka Apple TV. Taageerada Plex Media Server waxay ku egtahay qaabka Pro ee Shield TV.
Barnaamijyada si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa sidoo kale, taasoo la micno ah inay sii shaqeynayaan, ka duwan qaar ka mid ah dhufto ee kale, taas oo ay weheliso taageerada dheer ee Nvidia waxay ka dhigan tahay inaad hesho sanduuq qulqulaya oo ay tahay inuu istaago tijaabada waqtiga.
Garab barnaamijka taageerada tooska ah, Shield TV wuxuu leeyahay taageerada Chromecast 4K oo lagu dhisay, oo macnaheedu yahay barnaamij kasta oo laga tuuri karo Android-kaaga ama iPhone-kaaga, kiniin ama xitaa kombiyuutar ayaa loo diri karaa shaashaddaada si silig la'aan ah, oo ay ku jiraan BT Sport laakiin aan ku jirin Apple TV.
Barnaamijyo kale oo aan ahayn TV-yada iyo adeegyada fidinta fiidiyaha sidoo kale waa la heli karaa, oo ay ku jiraan ciyaaraha Android iyo adeegga Nvidia's GeForce Now game-streaming service, taas oo uu leeyahay heerarka lacag-bixinta iyo bilaashka ah ee kombuyuutarrada kumbuyuutarka isla markaana si la yaab leh u shaqeeya. Waxaad u baahan doontaa kantaroole ciyaaraha, halka Nvidia mid iibiso, waxaad isticmaali kartaa Xboxpad ama PlayStation joypad kasta oo taageera Bluetooth.
Guji oo ku dheji badhanka makarafoonka qalabka fog si aad ula hadasho Kaaliyaha Google. Sawir: Samuel Gibbs / The Guardian-ka
Kaaliyaha Google wuxuu ku dhisan yahay TV-ga Android wuxuuna u shaqeeyaa sida iskutallaabta udhaxeysa taleefanka Android iyo muuqaalka casriga ah sida Nest Hub Max. Guji oo ku dheji badhanka makarafoonka qalabka fog si aad ula hadasho Kaaliyaha.
Waad xakameyn kartaa dib uqabashada barnaamijyada, sida ciyaarida, hakad ama u boodid wadada xigta ee Spotify ama xitaa waqti gaar ah hees, filim ama show TV. Waxaad bilaabi kartaa barnaamijyo, hagaaji mugga ama raadso bandhigyada, filimada ama raadadka cod ahaan. Weydiiso Kaaliyaha inuu ciyaaro Lost in Space oo waxay bixin doontaa in lagu ciyaaro iyada oo loo marayo Netflix ama Google Play Movies.
Nvidia’s AI-powered HD-to-4K upscaling technology is very impressive, and ideal for dealing with the many shows and movies across the various UK TV catchup services, Netflix, Amazon and Google Play that are still in HD. Sawir: Samuel Gibbs / The Guardian-ka
The Shield TV’s ace in the hole is Nvidia’s new AI upscaling technology, kaas oo qaata HD ka kooban kana dhigaya 4K natiijooyin aad u cajaa’ib badan. In kasta oo ficil ahaan TV kasta ama sanduuqa sare-sare ay xakamayn karaan kor u qaadista aasaasiga ah ee waxyaabaha - fidinta HD content si ay ugu habboonaato shaashadda 4K oo leh afar laab pixels badan - Teknolojiyadda Nvidia waa mid kor ku xusan, qaasatan markaad daawaneysid muuqaallo aad u faahfaahsan.
Sawir-gacmeedyada waxay u muuqdaan kuwo si muuqata u qallafsan oo faahfaahsan, inta wejiyada, baabuurta iyo xitaa duurjoogta dhammaantood si weyn ayaa loo hagaajiyay xitaa marka la barbar dhigo kor u qaadista aasaasiga ah. Ku quudi sawir casri ah HD iyo farqiga u dhexeeya iyo waxyaabaha dhabta ah ee 4K ka jira ayaa si la yaab leh u adag in la ogaado. Xitaa waxay ka dhigeysaa shaqo hufan maaraynta wax duug ah sida NCIS, Futurama ama Knight Rider.
Kaliya isbarbardhiga wax sida wejiyada Will Smith iyo Martin Lawrence ee Wiilasha Bad ee saxda ah 4K oo ka soo horjeedda nooca HD AI-kor u qaadista waxaad bilaabi kartaa inaad ku aragto kala duwanaanshaha goobaha dhow ama markii sawirka asalka ahaa wax yar oo hadhuudh ah oo iftiin hooseeya.
Jaangooyada caadiga ah ee sideed-koronto iyo ethernet ikhtiyaar ikhtiyaar u ah dhinaca kale ee tuubada. Sawir: Samuel Gibbs / The Guardian-ka
Waxaad ka ciyaari kartaa muusikada asalka ka soo Spotify ama wixii la mid ah markaad wax kale qabanaysid.
Shield TV waxaa lagu xakameyn karaa iyada oo loo marayo Alexa on ku hadla Echo smart iyada oo loo marayo xirfadda TV-ga Nvidia Shield.
Shield TV wuxuu la socdaa dammaanad laba sano ah, laakiin Nvidia hadda ma bixiso dayactir, dib-u-warshadaynta ama barnaamijka ganacsiga, ugu dambayntiina ka dhigaysa mid la tuuro.
Qiimaha TV-ga Nvidia Shield 9 149.99 halka Shield TV Pro kharashkiisa £ 199. Qiimaha Xakamaynta Gawaarida ikhtiyaariga ah .99 59,99.
Wixii la barbardhigo, Qiimaha Amazon ee Fire TV Stick 4K .99 49.99, Dabka TV Cube kharashka 9 109.99, kharashka Google Chromecast Ultra 69 iyo kharashka Apple TV 4K 9 179.
Dhinacyada badankood waxay ku garaacdaa ama ku dhigtaa wax kasta oo kale, ha ahaato mid taageero u ah kii ugu dambeeyay ee Dolby Atmos, Heerarka Aragtida iyo HDR, taageerada barnaamijka ama xitaa dhismaha 4K Chromecast ee la dhisay. Laakiin waa kor u qaadista cajiibka ah ee AI taas oo ah muuqaalka dilaaga. Haddii aad inta badan ka fiirsato waxyaabaha HD ka socda Netflix, Amazon, YouTube, Google Play ama BBC iPlayer et al on your 4K TV markaa Shield TV waa sanduuqa lagu iibsado.
Duulista kaliya ee ku jirta boomaatada waa la'aanta barnaamijyada Apple TV ama BT Sport ee Google Play Store ee TV-ga Android, laakiin uguyaraan kan dambe wuxuu Chromecast u noqon karaa TV ga gaashaan taleefankaaga ama kiniinkaaga. Kaliya Apple TV 4K ayaa leh xulasho ballaaran oo barnaamijyo ah marka loo eego Android TV.
Shield TV ma ahan mid raqiis ah, soo galaya £ 150, laakiin waa dhakhso oo muuqaal buuxiyey, waxaa la taageeri doonaa muddo dheer wuxuuna leeyahay mid ka mid ah meelaha fog ee aad iibsan karto.
Iidooyinka: AI kor u qaadista, Android TV, degdeg ah, bilaa lacag la'aan, Dolby Vision, Dolby Atmos, taageero dheer, naqshadaynta booska-bannaan, fog fog, lagu dhisay 4K Chromecast, Kaaliyaha Google, GeForce Hadda Arrrimaha: qaali ah, ma laha barnaamijyada BT Sport ama Apple TV
Dib u eegista Amazon Fire TV Cube: weyn sanduuqa TV smart, hadalka smart cuncun
Sky Q 2019 dib u eegis: TV-ga qaaliga ah qiimo jaban
Dib u eegista TV-ga Virgin V6: jaakadaha ganacsiga oo dhan, sayidkiisna midkoodna
← smartphone Best 2019: iPhone, OnePlus, Samsung oo Huawei marka la barbar dhigo oo kaalinta 4 Waxyaabaha Ay Tahay Inaad Ka Ogaato Qaabka Faylka PDF →